ယူရိုပါလိဂ် နဲ့ ၁၆ သင်း အဆင့် တို့ကို ခွဲခြားပေးမယ့် . . . . . ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၅ ) - SPORTS MYANMAR
ယူရိုပါလိဂ် နဲ့ ၁၆ သင်း အဆင့် တို့ကို ခွဲခြားပေးမယ့် . . . . . ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၅ )
ချန်ပီယံ လိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ် ၅ ဟာ လမ်းခွဲ ပွဲစဉ် လို့ ဆိုနိုင် ပါတယ် ။ အသင်း အများအပြား ဟာ ဒီ ပွဲစဉ် အပြီး မှာ ၁၆ သင်း အဆင့် ကို တက်ရောက် သွားတတ်ကြ ပြီး အချို့ ကတော့ ယူရိုပါလိဂ် မျှော်လင့်ချက် အတွက် သာ ပွဲစဉ် ၆ ကို ကစား ကြရ တော့မှာပါ ။ ပွဲစဉ် ၄ ကတည်းက PSG ၊ ဘိုင်ယန် တို့ နောက်တစ်ဆင့် တက်သွား ခဲ့ကြပြီး ဒီ တစ်ပတ် အပြီးမှာ ဘယ်အသင်းတွေ လာရောက် ပူးပေါင်း ကြမယ်ဆိုတာ ကို စောင့်ကြည့် ရမှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
အုပ်စု A မှာတော့ PSG က ပွဲစဉ် ၄ အပြီးမှာ ကတည်းက နောက်တစ်ဆင့် တက်သွားခဲ့ ပါပြီ ။ ရီးရဲ ကတော့ ဒီပွဲစဉ် ကို နိုင်ရင် စိတ်ပူစရာ မရှိတော့ဘဲ သရေ သို့ ရှုံးခဲ့ ရင်တော့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်အထိ အဆုံးအဖြတ် ခံယူ ရနိုင် ပါတယ် ။ ဒီ အပတ် မှာ ရီးရဲ က PSG ကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံ ကစားမှာ ဖြစ်လို့ အနိုင်ရအောင် ကစားနိုင်မယ် ၊ မကစားနိုင်ဘူး ဆိုတာ သူတို့ အပေါ်မှာပဲ အများဆုံး မူတည်နေမှာပါ ။
အုပ်စု B မှာလည်း ဘိုင်ယန်မြုးနစ် က နောက်တစ်ဆင့် တက်သွားခဲ့ပြီး စပါး ကတော့ ဒီပွဲစဉ် ကို နိုင်ရင် ၁၆ သင်း အဆင့် ကို တက်ရောက်တော့ မှာပါ ။ စပါးဟာ အိုလံပီယာကော့စ် ကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံ ကစား ရမှာ မို့ နောက်တစ်ဆင့် တက်ဖို့ သေချာ သလောက် ရှိနေ ပါတယ် ။ မော်ရင်ဟို အတွက်တော့ မျက်နှာပန်းလှ ဦးမယ့် နောက်ထပ် ပွဲစဉ် တစ်ပွဲ ပါပဲ ။
အုပ်စု C မှာတော့ မန်စီးတီး က နောက်တစ်ဆင့် တက်ဖို့ လက်တကမ်း အလို ကို ရောက်နေပြီး ရှက်တာ ဒိုးနက် နဲ့ ဒိုင်နမို ဇာဂရက် တို့ က ဒုတိယ နေရာ အတွက် အခွင့် အရေး ရှိနေ ပါတယ် ။ ဒီ တစ်ပတ် မှာ မန်စီးတီး နဲ့ ရှက်တာ တို့ တွေ့ဆုံ နေပြီး အတ္တလန်တာ ကတော့ ဒိုင်နမို ဇာဂရက် ကို လက်ခံ ကစားရမှာပါ ။
အုပ်စု D မှာတော့ ယူဗင်တပ် အသင်း က ၁၆ သင်း အဆင့် အတွက် လုံလောက် သွားခဲ့ ပါပြီ ။ ဒါကြောင့် ဒီ တစ်ပတ် ကစားမယ့် အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် နဲ့ ပွဲ ကို အားထည့် ဖို့ မသေချာ တော့ ပါဘူး ။ အေတီကို ကတော့ အနိုင် ရမှသာ ပွဲစဉ် ၆ အဖြေကို စောင့်စရာ မလိုတာ ကြောင့် အီတလီ မြေပေါ်မှာ ဖြစ်လင့်ကစား ယူဗင်တပ် ကို အနိုင်ရအောင် ကြိုးစား သွားမှာပါ ။
အကျပ်ဆုံး အုပ်စုတွေ ထဲက တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အုပ်စု E မှာတော့ လီဗာပူး ၊ နာပိုလီ တို့သာ မက ရက်ဘူး ဆဲလ်ဘတ် ပါ နောက်တစ်ဆင့် အတွက် အခွင့်အလမ်း ရှိနေ ပါသေးတယ် ။ ဒီတစ်ပတ် မှာ နာပိုလီ တို့ အန်ဖီးလ် ကို သွားပြီး လီဗာပူး နဲ့ ရင်ဆိုင် ရမှာ ဖြစ်လို့ ရှုံးဖို့ အလားအလာ ရှိနေ ပါတယ် ။ ဒါကို ဆဲလ်ဘတ် အမိ အရယူ နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပွဲစဉ် ၆ ဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ နဲ့ ပြည့်နှက် နေဦးမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
Group of Death ဖြစ်တဲ့ အုပ်စု F မှာလည်း ဘာစီလိုနာ ၊ အင်တာ နဲ့ ဒေါ့မွန်တို့ အဖြေပြတ်ပြတ်သားသား မပေါ် ထွက်သေး ပါဘူး ။ ဒီတစ်ပတ် မှာတော့ ဘာစီလိုနာ ဟာ ဒေါ့မွန် ကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံ ကစား ရမှာ ဖြစ်ပြီး အနိုင် ရတာနဲ့ နောက်တစ်ဆင့် အတွက် လက်မှတ် ရတော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ အင်တာ မီလန် ကတော့ ဘာစီလိုနာ နိုင်သွားဖို့ မျှော်လင့် ရမှာ ဖြစ်သလို ပွဲစဉ် ၆ မှာလည်း ဘာကာ ကို အနိုင် ကစားနိုင်ဖို့ အားထုတ် ရဦးမှာပါ ။ အနေအထား ကတော့ အင်တာ မီလန် ပဲ ယူရိုပါလိဂ် ကို ရောက်လာမယ့် ပုံပါပဲ ။
အုပ်စု G မှာ တော့ ရက်ဘူး လိုက်ပ်ဇစ် က အခြေအနေ အကောင်းဆုံး အဖြစ် ရှိနေပါတယ် ။ ဘင်ဖီကာ ကွင်းမှာသွား ကစား ရမယ့် ဒီပွဲစဉ် ကို အနိမ့်ဆုံး သရေ ကစားလိုက် တာနဲ့ နောက်တစ်ဆင့် အတွက် လုံလောက် သွားမှာပါ ။ လိုင်ယွန် နဲ့ ဇင်းနစ် တို့ ပွဲ မှာ လည်း လိုင်ယွန် က အနိမ့်ဆုံး သရေ ကျအောင် ကစားပြီး ၁၆ သင်း အဆင့် အတွက် ဖိအားတွေ ကိုလျော့ချ သွားနိုင်ဖွယ် ရှိ ပါတယ် ။
အိုင်ယက်စ် ၊ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ဗလင်စီယာ တို့7မှတ်စီ နဲ့ အကျိတ် အနယ် ဖြစ်နေတဲ့ အုပ်စု H ကတော့ နောက်ဆုံး အချိန် အထိ ပရိသတ်တွေ ကို ဆွဲဆောင် ပါလိမ့်မယ် ။ ဒီအပတ် မှာ ဗလင်စီယာ က ချဲလ်ဆီး ၊ လိုင်လီ က အိုင်ယက်စ် တို့ကို လက်ခံ ကစားကြရမှာ ဖြစ်ပြီး အနိုင် အရှုံး ဘယ်လို ရလဒ် ထွက်ပေါ်ပါစေ ၊ ပွဲစဉ် ၆ အထိ ရင်ခုန် နေရဦးမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။